MACLUUMAADKA TARANKA EE DOORKA JIIRKA-JIIR IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka ee Doorka Jiirka-Jiir iyo Sawirro
Chihuahua / Jiirka Jiirka eeyaha Noocyada isku dhafan
Ace the Chihuahua, Jiir Terrier oo isku jira 1 sano iyo 9 bilood jir— 'Ace wuxuu ahaa hadiyad weyn oo lama filaan ah oo ka timid saaxiibkeyga ugu fiican. Wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro alaabtiisa iyo kubbadaha tennis-ka. Isaga shakhsiyadda waa mid aad u adag oo aad u baahan markay tahay wax kasta oo uu doonayo. Isagu aad buu ii jecel yahay aniga iyo saaxiibbadayda ugu dhow. Fagaaraha, isaga ficil badan umana oggolaan doono in qofna uu jeclaado. Meelwalba waan la aadaa waana jacaylka noloshayda ... :) '
Jiirka-Cha ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Chihuahua iyo Jiir Jiir . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Jiir-Cha
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Jiirka-Cha
'Tani waa Zoey. Iyadu waa cunug yar oo 11 bilood jir ah oo ka yimid Boston, MA. Waxay ahayd badbaadin ka timid ey eey ku eedaysay xadgudub xayawaan. Waxay ahayd 1 ka mid ah 8 eeyo yaryar oo la soo badbaadiyay. Iyadu waa kalabar Jiir Terrier iyo badh Chihuahua. Aabaheed wuxuu ahaa merle buluug ah Chihuahua, kaas oo hiddo-wadaha meeriska ah loogu gudbiyay Zoey. Waxaan horay u soo arkay dhammaan noocyada meeriska, laakiin weligood kuma jirin midabkan. U fiirso midabku inuu u kala jaban yahay xagga sare ee madaxeeda, sidoo kale wuxuu ka dhacaa garka hoostiisa, iyadoo xariiq qumman uu ku yaallo bartamaha madaxeeda. Zoey ayaa loogu yeeraa an Eyga Duurjoogta Afrika ama Waraabe ka socda dadweynaha socodka mar walba. Zoey aad buu u macaan yahay oo doqon yahay oo waliba caqli badan. Waxay si dhakhso leh u baratay amarrada waxayna jeceshahay inay aaddo xeebta. Zoey waxay dooneysaa feejignaan waxayna cabi doontaa marka diva loo waayo wadadeeda.
'Jiirka-Chas (Chihuahua / Jiir Terrier isku daraa) -taani waa looska iyo J.P Peanut waa 6 jir JP waa 2. Labadooduba waxay leeyihiin shakhsiyaad gabi ahaanba ka duwan sidii ay u noqon lahaayeen isku dhafan! Lawsku runtii waa caajis! Nolosheeda oo dhan kama koobna wax ka badan seexashada iyo ku fadhiisashada dhabta. JP waa tamar buuxda ! Wuu ordi lahaa maalintii oo dhan haddii uu awoodo. Labaduba waa eeyo waa weyn illaa iyo hadda waan soo qabtay wax arrimo ah oo iyaga la xiriira wax kastoo!
sawirrada sheybaarka sheybaarka iskudhafan eeya yaryar
'Kani waa Beamer, Jiir Terrier / Chihuahua isku jira. Wuxuu qiyaastii yahay 5 sano jir waxaana laga soo kaxeeyey hoygayaga xoolaha. Wuxuu jecel yahay isdhexgalka aadanaha waana inuu ku dhex jiraa ficilka. Maaddaama uu ka yimid hoyga, ma caddaynno taariikhdiisa, laakiin wuxuu ogyahay inuusan aad ugu fiicnayn carruurta yaryar iyo eeyo kale , gaar ahaan ragga isaga ka weyn. Waan helaynaa socday 2-3 jeer maalin oo wax cuna cuntada eyda qalalan . '
'Tani waa cunugayga macaan ee Rilo, mana aanan ku farxi karin iyada. 9 bilood ayey ku jirtaa sawirkan, wayna leedahay xaddi badan oo tamar ah . Waxay jeceshahay inay qodo bustayaasha habeenkii ka dibna si buuxda u fidiso. Waxay jeceshahay inay la ciyaarto eyda kale, laakiin waa inay marka hore urisaa. Kahor intaanay raaxaysan, waxay uun iska fogaan doontaa masaafadeeda. Illaa iyo hadda, ma aysan ahayn taageere weyn eeyaha waaweyn.
Waxaan shaqeynayey 13-saacadood waxaan qorsheynayey arooskeyga simistarkii la soo dhaafay, iyo dabeecadeeda jaceylka iyo xaqiiqda ah inay aad u faraxsanaan laheyd markaan guriga imaado in jirkeedu wada ruxruxo ay igu filan tahay inaan fayo-qab fayoow. Caadadeeda xun ee keliya ayaa ah in haddii ay maqasho dhawaq albaabo ama wax la mid ah TV-ga, waxay bilaabi doontaa ciyey. Way sii socotaa socod jimicsi ah ''
'Cesar Millan waa mid ka mid ah dadka faro ku tiriska ah ee TV-ga run ahaantii run ka jira maalmahan. Runtii waan jeclahay bandhigiisa waxaanan ku dabaqay waxyaabo badan xayawaankayga. Maalintii shalay ahayd eeygayaga cusubi wuu xumaa waxaanan u galiyay qaab is-hoosaysiin ah oo waan iska tegey. Ma uusan sameynin dhaqankaas tan iyo markaas. Rilo uma baahna tababar badan waxay dooneysay inay sameyso wax walba iyo wax walboo aniga iga farxinaya, marka maya fudud halkaas ayeey ka shaqeyn doontaa. Waxaan isku dejiyaa xaalad deggan, kalsooni leh markii aan la macaamilayo xayawaankayga guriga, wayna i dhagaystaan, sidaa darteed falsafadiisa ayaa shaqeyneysa, xitaa qof aan tababbarin.
Daughtry Rat-Cha oo 6 bilood jir ah iyo 6 rodol— Waxay jeceshahay inay aad u booddo heer sare, waxay jeceshahay dhunkashada, waana eeyga dhabta ah oo fiican! Waxay jeceshahay Chihuahuas kale iyo eeyo yaryar. Waxay ka socotaa kuwa waaweyn, in kastoo. Way fududahay in la tababaro iyo eeygii ugu macaanaa abid! Hooyadeed waa 100% Chihuahua aabeheedna waa 100% Jiir Terrier. '
Abigail Rose isku darka Rat-Cha markay jiraan 6 bilood— Aad ayey u dhaqan fiican tahay. Way fadhidaa, ciyaartaa soo dheelitir waxayna ku jiifsataa dhammaan wixii amarka ah, oh sidoo kale iyadu waa guri wadaag. Waxay jeceshahay fiiro gaar ah wax walbana way sameyn laheyd si ay ula joogto aabaheed (aniga) LOL. Waxay ahayd mid aad u fudud tababarka. Waxay qaadatay kaliya 1 bil in la sameeyo dhamaan 3da wax. '
Bud, isku-dhafka u dhexeeya Chihuahua iyo Jiirka Terrier (Jiirka isku-jirka ah), qiyaastii 1½sano jir culeyskiisu waa 15 rodol
Gabar yar oo qurux badan Lula Belle Rat-Cha oo jirta 15 bilood - milkiilaheeda ayaa leh, Aad ayay u firfircoon tahay, laakiin waxay la mid tahay sida ay ugu jiifsato dhabteyda. Marar dhif ah ayay qaylisaa oo waxay samaysaa oo keliya markay runti faraxsantahay inta aan ciyaarayno. Waxay si dhakhso leh ugu baratay inay adeegsato Wee-Wee Pad-keeda. Waxaan ku abaal mariyaa daaweynta beerka mar kasta oo ay saxarooto. Marka ay tahay 15 toddobaad, waa qiyaastii 5-6 rodol. Waxay jeceshahay inay seexato lugahayga hoostooda inta aan daawanayo telefishanka ama kumbuyuutarka. Iyadu waa farxad iyo cabsi mararka qaar, laakiin adduunka ugama ganacsan doono. '
Barkley, oo ah 4-bilood jir Jiir-Cha ah oo ay weheliyaan Cy, saaxiibkiis bisad-Barkley waa isku-dhaf u dhexeeya Chihuahua iyo Jiir Jiir.
Little Tinker Tot oo ah cunuga loo yaqaan 'Rat-Cha' oo qiyaastii 7 toddobaad jira
Eeg tusaalooyin badan oo ah Jiirka-Cha
Sawirada Jiirka-Cha 1
Liiska eeyaha Chihuahua Mix Breed
waa kubadaha xanjada macaan sun ah eeyaha
cabirka bulldog french
buuraha bernese eey basset hound mix
Tibetan mastiff isku darka sarkaal oo dahab ah